Mona Sahlin oo ka hadashay ahmiyadda ay Anna Lindh lahayd - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mona Sahlin oo ubax dhigeysa qabrigii Anna Lindh. Sawirle: Henrik Montgomery/Scanpix
Mona Sahlin oo ka hadashay ahmiyadda ay Anna Lindh lahayd
La daabacay onsdag 11 september 2013 kl 12.33
Mona Sahlin oo horay u soo ahayd hoggaamiyaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga, isla markaasna muddo dheer la soo shaqaysey Anna Lindh ayaa la weyddiiyey ahmiyadda ay Anna Lindh iyada qof ahaan u lahayd.
- Anna Lindh waxay aniga ii la micne ahayd 30 sano oo saaxiibtinimo ah. Waxay ii ahayd saaxiibad, siyaasi aan ku daydo iyo qof magac weyn ku yeelan karay aayaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga. Nasiibdarro wa anala ka dilay.
Muxuu xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga iyo Iswiidhen ku weydey dilkii Anna Lindh?
- Xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadigu wuxuu halkaas ku waayey mid ka mid ah xiddigihiisii ugu magaca dheeraa. Markii la ii magacaabay hoggaamiyaha xisbiga, waxaan isla markiiba muujiyey dareen isku dhafan. Waan ku faraxsanaa in hoggaamiyaha xisbiga la ii magacaabo, laakiin haddana waan ka caloolxumaa, waayo Anna ayey ahayd in ay booskaas gasho. Welina sidaas ayaan dareensanahay.
Sidee ayuu xisbigu u xasuusanayaa Anna Lindh?
- Waxaan guddoomiye u ahay Khasnadda Anna Lindh. Waxaan mar walba ka hadalnaa siyaasadda si aan u xasuusanno Anna Lindh. Ma aha oo qura inaan xasuusanno shakhsigii Anna oo la dilay ee waxaan gaar ahaan siyaasaddii Anna Lindh ee ku dayashada lahayd. Waxaan kaloo is xasuusinaa waxqabadkeedii siyaasadeed, gaar ahaan u dagaalanka xuquuqda aadanaha, siiba tan dadyowga kurdiga iyo falasdiiniyiinta, oo maanta dhabbatus u ah dad badan oo dhallinyar. Waxaan kaloo is fahansiinaa ahmiyadda ay leedahay in dumarkuk u dhiirradaan oo ka qaybqaataan siyaasadda. Sidaas ayey ahayd sidii Anna Lindh looga bartay.